MDC-T Youth: Zanu PF's Jim Kunaka Wants to Kill Us
MDC T youth secretary for Harare province Denford Ngadziore is accusing Zanu PF youth member and alleged Chipangano leader Jim Kunaka of threatening him with death for leading his youth members into the streets demonstrating against the Zanu PF government’s alleged misrule.
Ngadziore claimed Kunaka called him Friday and told him that Zanu PF members would destroy MDC-T supporters’ houses and property.
Asked how he managed to identify Kunaka as the caller, Ngadziore said, "I identified Kunaka as the caller because he identified himself before threatening me. I also know his voice and I have his mobile number which he used to call me."
Kunaka recently rejoined Zanu PF following his suspension from the ruling party and joined Joice Mujuru’s Zimbabwe People First party.
Interview With Denford Ngadziore
But Kunaka denied the allegations saying he has more important issues to deal with than thinking of MDC-T members who do not pose any threats to him.
"If they don't have anything to do they must go home and sleep and shut up! Why should I threaten them? How strong are they? They are not strong enough that I can threaten them. If I want to deal with them I can just approach them and deal with them," Kunaka said.